Kufamba kubva kuBerlin kuenda kuBeijing kuburikidza neHelsinki mumatatu matatu | Zvazvino Zvinyorwa
Kufamba kubva kuBerlin kuenda kuBeijing kuburikidza neHelsinki mumatatu matatu
Chando chinoramba kuuya, matsutso anenge achiri zhizha uye hapana donhwe remvura rinodonha. Ini ndinotarisa neshanje pa kure zvakanyanya, nyika dzinotonhora, kunonaya zvakanyanya. Ini ndinotofunga nezveBeijing, asi guta guru reGerman riri padyo neni uye guta guru reFinland rinotonhora. Ndiri kutora nzendo nhatu, zvakare munguva.
Kurangarira nyaya nhatu dzekutanga dzeizvozvo Bernie pfuti Del Berlin 30s uye 40s, yakagadzirwa na Firipi Kerr. Kushevedza makava ekare erima mu Beijing ikozvino ne Detective Mei Wang, ivo Diane Wei Liang. Uye kuperekedza iwo vanambuya vatatu vasingazivikanwe isa vaongorori muchando Helsinki de Minna Lindgren.
1 Berlin Trilogy - Firipi Kerr
2 Beijing Trilogy - Diane Wei Liang
3 Helsinki Trilogy - Minna Lindgren
Berlin Trilogy - Firipi Kerr
Zvakare inonzi Berlin Noir, iyi trilogy inounganidza iyo mazita matatu ekutanga kubva pane akateedzana achitarisa mutikitivha wechiGerman Bernie pfuti. Munyori weScotland Philip Kerr akaita dhizaina yake muna 1989 nenhau yake yekutanga, Kurume violets, uye zvakare akatanga iyi saga yakabudirira iyo yatove mabhuku gumi nerimwe. Gunther, a ex-mumiriri weKripo (mapurisa anotyiwa kwazvo ematsotsi eTatu Reich), yava a detective nyanzvi pakutsvaga vanhu vasipo.
En Kurume violets tiri muBerlin muna1936, apo guta rinogadzirira Mitambo yeOlympic. Muna 1990 yakabudiswa Akapara mhosva, umo Gunther anofanirwa kudzokera kuKipro kunoongorora humhondi hwevechiri kuyaruka hwakaitika muna 1938. Uye muna 1991 chikamu chechitatu cheiyi trilogy chakaonekwa, ChiGerman Chinodiwa. Isu tatova muna 1947, mushure mekupera kwehondo kukundwa kweGerman. Gunther anozviwana abatanidzwa mukurangana kwakajeka pamwe nevezvehungwaru vekunze vanobatanidzwa.
Beijing Trilogy - Diane Wei Liang
Iwo mazita matatu akanyorwa nemunyori weChinese (anogara muLondon) Diane Wei Liang anounzwa pamwechete muvhoriyumu imwe. Nyeredzi ivo mei wang, mumwe wevatariri vechiratidzo kwazvo muasia yekuparwa kwemhosva. Uyu muongorori anoziva uye anofamba zviri nyore kuburikidza ne Beijing yemazuva ano uye izere nemisiyano.
En Ziso rejade Mei mukadzi akazvimirira akazvimirira anoshanda mubazi revatikitivha rakazvimirira. Mutengi anokukumbira kuti uwane yekare jade ibwe chakabiwa panguva yeCultural Revolution. Mei anomanikidzwa kurangarira uye kuongorora munguva iyoyo ine rima yeChina nhoroondo inozomutungamira kune a chakavanzika kwazvo izvo hazvifarire kuburitsa.
Mumusoro wechipiri Butterflies kune vakafa Mei Wang achafanirwa kuongorora kutsakatika kweyechidiki nyeredzi anonzi Kaili uye achatevera zvakare akatsiga "bepa bhatafurayi" raakawana mune yake imba yeKaili.
Pakupedzisira, mu Imba yeMweya weNdarama, Mei anosangana negweta nemukana uyo anomupa kuti aongorore nyaya yekambani inogadzira mapiritsi inokwanisa kupodza moyo yakaputsika. Uye panguva imwechete mutungamiriri wehurumende anoonekwa padhipatimendi revatikitivha nehurongwa hwekuivhara.
Helsinki Trilogy - Minna Lindgren
Finnish munyori Minna Lindgren akagadzira izvi mbuya nonagenarian vatatu uye yakawana tendero yavatsoropodzi nevaverengi. Uine nhema kubata kwechakavanzika uye kurangana uyezve kuseka. Fomura yayo inoyeuchidza nezveyaiye akabudirira kwazvo muvakidzani weSweden Jonas Jonasson. Sanganisa kwekushoropodza munharaunda, dema kuseka uye iyo poindi yevatatu Marple vakadzi a la Finnish. Iwo mavambo uye zvisirizvo zve Siiri, Irma naAnna-Liisa, chirikadzi dzinotungamira, dzafadza vaverengi vazhinji mumazita matatu aya.
En Vanambuya vatatu nemubiki akafa isu tinoziva shamwari idzi nevagari vari Sango reTwilight, yepachivande furati nzvimbo yevakwegura muHelsinki. Asi, kana zvese zvikaita senge zvinowanzoitika, mune yekugara pane kuuraya kunoshamisa kuti kuna vanambuya vatatu vasina mhaka vanechido uye nenguva yemahara inova dambudziko kugadzirisa.
Mumusoro wechipiri, Vanatatu mbuya uye nejuzi kumashure nekudzoka, shamwari nhatu dzinoona runyararo rwehupenyu hwavo rwakavhiringidzwa nevashoma kusingaperi kugadzirisa kunoshanda Pamba pekugara. Kamwe chete, Anna-Liisa bhokisi rezvishongo rinonyangarika pasina kana trace. Kana vafunga kutamira kuimba yakagovaniswa, matambudziko ekuvapo achavapo. Vachaonawo kuti mabasa aya kunyumwa uye pamwe vanovanza zviitiko zvematsotsi izvo ivo zvavanozoongorora.
Uye pakupedzisira, mukati Vanambuya vatatu uye chirongwa chekusabvisa, Pakupedzisira mabasa ekuvandudza muThe Twilight Forest apera uye vanhu vakuru vanogona kudzokera kudzimba dzavo. Asi ikozvino mafambiro ari mumaoko e sangano rechitendero yehunhu husina chokwadi. Zvisinei, pane imwe nyaya inonetsa vagari zvakanyanya. Iyo zvigadzirwa zvemichina havachadi vabatsiri vevachembera. Shamwari nhatu idzi dzinoronga hurongwa hweku kuparadza iyo komputa system izvo zvichavatungamira ku jeri uye chero chinhu chinogona kuitika ipapo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Kufamba kubva kuBerlin kuenda kuBeijing kuburikidza neHelsinki mumatatu matatu
Aya akanakisa mitsara yaKazuo Ishiguro